ကျွန်တော်တို့အိမ်: နိစ္စဓူဝထဲက အပိုင်းအစတွေ
Posted by ဇော် at 4:18 AM
ရင့်ကျက်မှုတွေ ပိုမို နားလည်တတ်မှုတွေကို နိစ္စဒူဝတွေကြားမှာကောင်းကောင်းခံစားနေရသလိုပါပဲ..
ဟမ် ... ငါ့တစ်ယောက်တည်း ရွေးပြီးတက်ဂ်ရသလား၊ မရဘူးကွာ မရေးဘူး ဟွန်း :(
မာဖီးယား သင်ပေးပါ ဆိုလို့လည်း သင်ပေးရသေးတယ်၊ တက်ဂ် စရာရှိတော့ သတိရတယ် ဟုတ်လား?
အဲ ... ရန်တွေ့နေရတာနဲ့ မမန့်ရသေးဘူး။ အရေးအသား ကတော့ ပြောစရာမလိုဘူး ညီဇော်ရေ။ အညတရ တစ်ယောက် ဖြစ်တယ် ဆိုရင်တောင်မှ မှတ်မှတ်ရရ ရှိတဲ့ သူတွေက မနည်းပါဘူး လို့။ ညီ့ရဲ့ဖြစ်တည် မှုကို ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ။ အိမ်မက်က လန့်နိုးလာတဲ့ အခါ ၀င်ရတဲ့ ဒျူတီမှာလည်း အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေ ...
သတိတရနဲ့ ရေးပေးလို့ ကျေးဇူးနော်...
ညီမလေးရေးတဲ့ အရေးအသား အတွေးအခေါ်လေးတွေကလဲ တစ်မျိုးလေး ကောင်းနေတာပဲနော်....
ဆန္ဒနဲ့ ဘဝဟာ ထပ်တူမကျကြပါဘူး
လုပ်သင့်တာတွေကို လုပ်ချင်တာတွေ နဲ့လဲလဲ ပြီး ယူနေရတာ စိတ်ကတော့ မပါလှဘူးပေါ့ ကိုစွန့် လွှတ်လိုက်ရတာတွေအတွက် တစ်စုံ တစ်ခု ပြန်ရလိုက်ရင်ပဲ “ငါ” ဆိုတဲ့ အတ္တ ကောင် အတွက် ဖြစ်သာပါရဲ့ ညီဇော်ရေ အစ်ကို တို့ တွေရဲ့“နေကောင်းလား ညီဇော်ရေ” ဆိုတဲ့ ရင်ထဲကလာတဲ့ စကားတွေ ညီဇော်အတွက် အားဖြစ်ပါစေ ..... မာဖီးယား ကစားဖို့ တော့ ဟုတ်ဘူးနော် :))))
လွတ်လပ် ပျော်ရွှင်ပါစေ ညီဇော်ရေ
ဇော် ရယ် ဝံတော့ မာဖီးလဲမယားနိုင်ပါဘူးလေ အဲဒါ ပါလုပ်လို့ကတော့ စာလဲဖတ်ရမှာဟုတ်ဘူး တနေ့တနေ့ ကျောင်းနဲ့အဆောင်နဲ့ လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေတာ ဟဟဟဟ ဘလော့ဂ်ကလဲ ဝါသနာပါတော့ ဂင်းရသေးတယ်လေ ဖီးယား ဖီးယား လုပ်လို့ကတော့ ဟက် ဝံတကောင် ကျောင်းတောင်မသွားနိုင်ပဲ စွဲနေမှာ ဒါကြောင့် မြိုသိပ်ကာ မစ ပဲ နေတာ ဟိဟိ
ဇော်ရေ နေကောင်းရင် ပြီးတာပါပဲဟာ ဝံက ဇော် နေမကောင်းဘူးထင်နေတာ သမီးဂျီးကို မေးကြည့်တော့ သူလဲ အလုပ်တွေ ဆက်နေတယ်လို့ပြောလို့ မအားဘူးမှတ်နေတာ ဟိဟိ
ကဲ ပြန်တော့မယ်နော် ဇော် ဘိုင်တာ့တာ
ဇော်ရေ ဘ၀ဆိုတာ နေတတ်ရင် ပျော်စရာကြီးပါ ဂျူတီကို ထောင်နဲ့တင်စားလိုက်ရင် ဇော့်အတွက် အလုပ်ချိန်တိုင်းမှာ မောလျှနေမှာပေါ့ ပျော်စရာတွေကို ကြံဖန်တွေးရင်း ဂျူတီဆိုတာကြီးကို ပျော်ပျော်ကြီးဖြတ် သန်းလိုက်စမ်းပါဟာ အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်
ဘာတွေ မပြောတာလည်း ညည်းနှယ့်အေ့
ဂျစ်ညီမလုပ်နေပြီး မပွင့်လင်းလိုက်တာအေ့ :P
ငါးရက်ပဲလိုတယ် ဂျစ်ညီမရ ညည်းထက်စောတယ်
နိစ္စဒူဝအလုပ်ထဲမှာ ဘလော့လည်ခြင်းရော မပါဘူးလား...
အခုတလော မအားဘူးပေါ့... ဘာတွေရှုပ်နေလဲ...
စကားလုံးတွေကတော. လူကောင်လေးနဲ.ကို မလိုက်ဘူး
ငဇော်ရေ ... ဟီးးးးးးးးးးး ခင်လို.စသွားတာနော် တကယ်ကို
ကောင်းတာပါကွာ ... တစ်ချို.စားသားတွေက ကဗျာလိုလိုဘဲ ... :)
နေ့စဉ်chatနေရတဲ့လူတွေကိုတော့ “ပျင်း”သလိုလိုပဲ :P
ညီဇော် ရေ ရောက်တယ်ဗျို့ ။
ပန်းဝတ်မှုန်ကြား တောင်ပံသေးသေး နှင်တံသေးသေး
နှင့် မြူးထူးပျံသန်းခွင့်လို ဘဝမှာလည်း အပူအပင်
ကင်းကင်းနဲ့အေးငြိမ်းစွာ ရှင်သန်နိုင်ပါစေလေ။
အရိုးသီချင်းထဲကလို မဟာလူတန်းစား အိမ်မက်များ
အတွက် ကျုပ်တို့ တစ်တွေ မနက်တိုင်းထကြွ
လူလည်အာရှသား (ဂျုတီတွေကစောင့်ဆိုင်းလို )့။
အေးပေါ့.. မင်းသားလေး လတ်လတ်ဇော်ရေ..
ဘယ်ချိန် ခရီးဆုံးမယ်မှန်း မသိတဲ့ ဒီလူ့ဘဝကြီးထဲမှာတော့.. အကိုတို့တစ်တွေလည်း အတူတူပါပဲလေ..
နားခိုစရာ ဘူးတာရောက်တော့လည်း နားခိုရတာပေါ့..
တစ်ရပြန်ဘီ။ မရိုးနိုင်တဲ့ နိစ္စဓူဝ ကိုလာဖတ်တယ်။
တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်စေ။။။။ ဟု ဆုလာပေးသွားသည်။